1992 – Year – Channel Myanmar
The Last of the Mohicans (1992) The Last of the Mohicans (1992) IMDb - 7.7/10________Rotten - 93% Won 1 Oscar. Another6wins & 17 nominations Unicodeအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာတော့ ၁၇ ရာစုက Red Indian လူမျိုးတွေနဲ့ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တွေအကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မင်းသားကြီး Daniel Day‑Lewis ကို မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုလဲမမှားပါဘူး။ Rating တွေကြည့်တာနဲ့တင် ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားဆိုတာ အထူးတလည် ညွှန်းပြစရာမလိုတဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲ ခံစားကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Zawgyiအေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားေတြထဲက တစ္ကားျဖစ္တဲ့ ဒီဇာတ္ကားဟာေတာ့ ၁၇ ရာစုက Red Indian လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ေတြအေၾကာင္းကို အေျခခံျပီး ရိုက္ကူးထားတာပါ။ မင္းသားၾကီး Daniel Day‑Lewis ကို မွတ္မွတ္ထင္ထင္ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားဆိုလဲမမွားပါဘူး။ Rating ေတြၾကည့္တာနဲ႔တင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ဇာတ္ကားဆိုတာ အထူးတလည္ ညႊန္းျပစရာမလိုတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ပဲ ခံစားၾကည့္ရႈဖို႕ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ File size…(1 GB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….02:02:00 Subtitle….Myanmar Subtitle ...
A Few Good Men (1992) A Few Good Men(1992) IMDb.....7.7,,,,,Rotten.....82% Rules of Engagementဆိုတဲ့ စစ်ကား ကိုတော့ တော်တော်များများကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်တယ်...အဲ့လိုကားမျိုးကို သဘောကျတဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီကားကိုကြည့်သင့်တယ်.....ဒီကားက နယ်ခြားစောင့်စစ်တပ်မှာ စစ်သည်တစ်ယောက်သေဆုံးတဲ့အကြောင်းကို အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ကူး ထားတယ်....စစ်သည်အချင်းချင်းအပြစ်ပေးရာကနေ မတော်တဆသေဆုံးသွားတယ်.... ဒီအမှုကို ကိုင်တွယ်ဖို့ စစ်တရားရုံးရှေ့နေအဖြစ် Tom Cruise ကိုတာဝန်ပေးခြင်းခံရတယ်...ဒီကားက ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ စစ်ကားထဲမှာ အကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်..အယ် လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့ကားတော့မဟုတ်ဘူး....သို့ပေမယ့် စကားလုံးတွေနဲ့ စွမ်းအားကတော့ လက်နက်ကြီးထက်ပြင်းထန်ပုံရတယ်... ဇာတ်လမ်းက စစချင်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်....ကျွန်တော်ပြောရင် Spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး....ဒီကားရဲ့ ဒိုင်ယာလော့တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အလှပဆုံး မြန်မာမှုပြုပေးတဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ Ko Ye Pye Sone ပါ....IMDbရော Rotten ရော အမြင့်ဆုံးမှာရှိနေသလို သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း. Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Mooreတို့ဖြစ်လို့ ဒေါင်းကြည့်သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်ကြပေတော့..... ------------------------------------------------ Rules of Engagementဆုိတဲ့ စစ္ကား ကုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္ဖူးၾကမယ္ထင္တယ္...အဲ့လုိကားမ်ဳိးကုိ သေဘာက်တဲ့ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကားကုိၾကည့္သင့္တယ္.....ဒီကားက နယ္ျခားေစာင့္စစ္တပ္မွာ စစ္သည္တစ္ေယာက္ေသဆုံးတဲ့အေၾကာင္းကုိ အဓိကဇာတ္အိမ္တည္ၿပီးရုိက္ကူး ထားတယ္....စစ္သည္အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ေပးရာကေန မေတာ္တဆေသဆုံးသြားတယ္.... ဒီအမႈကုိ ကုိင္တြယ္ဖုိ႕ စစ္တရားရုံးေရွ႕ေနအျဖစ္ Tom Cruise ကုိတာ၀န္ေပးျခင္းခံရတယ္...ဒီကားက ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ စစ္ကားထဲမွာ အေကာင္းဆုံးစာရင္း၀င္လုိ႕ေတာင္ေျပာလုိ႕ရတယ္..အယ္ ...
All’s Well, Ends Well (1992) IMDb Rating (7.3) ရရှိထားတဲ့ မင်းသားကြီး စတီဖင်ချောင်ရဲ့ ဟာသဇာတ်ကားလေးပါ။စတီဖင်ချောင်အပြင် အခြား မင်းသားမင်းသမီးသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားပါတယ်။ညီအစ်ကိုသုံးယောက်အကြောင်းကို အခြေပြုလို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပုံဖော်ထားတာ ဇာတ်အိမ်ကျနလှတာမို့နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဒီနာမည်နဲ့ပဲ ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်မံရိုက်ကူးခဲ့ကြတာ တွေ့ရမှာပါ။မိသားစုဟာသဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ တုံးကျကျ ပြားကျကျသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တဝကြီးကြည့်ရှုရမှာပါ။File size…(900 MB) Quality…WEB-DL Rip 720p Format…mp4 Duration….01:50:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by May Thu
Unforgiven (1992) Unforgiven (1992) IMDb - 8.2/10_____Rotten - 96% Won4Oscars. Another 46 wins & 46 nominations ဒီကားကို ဒါရိုက်တာ Clint Eastwood ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ.. Top Rated Movies #134 စာရင်းဝင်ခဲ့သလို အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆု ၊အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု ၊အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ဆု စတဲ့ အော်စကာ(၄)ဆုရခဲ့ပါတယ်.. ၁၈၈၀ခုနှစ်လောက်က ကောင်းဘွိုင်လူတန်းစားတွေရဲ့ လူနေမှုစရိုက်ကတော့ အတော်ဆန်းတယ်.. ကိစ္စတိုင်းနီးပါးကိုသေနတ်နဲ့ခလုတ်လေးဆွဲပြီးဖြေရှင်းလေ့ရှိကြတယ်... ဒီလိုအချိန်မှာ Bill ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ တခြားသူတွေထက်ချမ်းသာသလို အင်အားလည်းကြီးတယ်.. သူက ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ငွေရှာတဲ့အပြင် သေနတ်အားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေလည်းရှိတယ်... တစ်နေ့တော့ ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကို ဧည့်သည်က ဓားနဲ့မွှမ်းသွားတယ်... ပြည့်တန်ဆာတွေအတွက်တော့အတော်နာကျဉ်းစရာကောင်းပေမယ့် Bill ကတော့ မြင်းတွေကို လျော်ကြေးအဖြစ်ယူပြီး ဓားနဲ့မွှမ်းတဲ့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်.... ဒီကိစ္စကို ပြည့်တန်ဆာတွေက လုံးဝမကျေနပ်ဘူး... ပြည်တန်ဆာတွေရဲ့ နာကျဉ်းချက်က ဘယ်လောင်တောင်ကြီးလဲဆိုတော့ တစ်သက်လုံးရှာသမျှငွေတွေကိုစုပေါင်းပြီး ဓားနဲ့မွှမ်းတဲ့သူတွေကို သတ်ပေးဖို့ ကြေးစားလူသတ်သမား ငှါးရမ်းပါတော့တယ်.... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Tinnilar Lwin ဖြစ်ပါတယ်... File Size : (956 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…02:10:00 Genre : Drama, Western Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by ...
Batman Returns (1992) Batman Returns က Tim Burton director လုပ္ခဲ့တဲ့ Batman သုံးကားထဲ တစ္ကား အပါအဝင္ပါ။Gotham ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရဆိုးေျမာင္းေတြထဲမွာ ပင္ဂြင္းလူတစ္ေကာင္ ႐ွိေနတယ္ဆိုၿပီး ေကာလဟာလေတြ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္..Max shreck အမည္ရတဲ့ ေဂၚသမ္မ်က္ႏွာဖုံးသူေ႒းတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးက စြမ္းအင္ေတြကို စုတ္ယူမဲ့ Power Generator တစ္ခု လုပ္ဖို႔ ၾကံစည္ေနခ်ိန္..လူေလးစား ပင္ဂြင္းဟာ Max ရဲ႕ အၾကံေတြကို သိၿပီး Max နဲ႔ ေပါင္းၿပီး.. ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လုပ္ဖို႔ ၾကံခဲ့တယ္။max သူ႔အၾကံကို သိသြားတဲ့..Selena ကို ႏႈတ္ပိတ္သတ္ဖို႔ ၾကံခဲ့တယ္။Selena မေသပဲ Catwoman ျဖစ္သြားတဲ့အခါ Batman အေနနဲ႔ ဗီလိ္န္သုံးေကာင္ ကိုယ္တစ္ေကာင္ ႏြဲဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။တစ္ဖက္တစ္လမ္းကလည္း Bruce wayne အေနနဲ႔ Selena နဲ႔ ခ်စ္ႀကိဳက္မိတဲ့အခါ......။ ဆက္ျဖစ္လာဦးမဲ့ Batman ရဲ႕ စြန္႔စားခန္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ပဲ ခံစားၾကည့္ၾကပါ။Gotham ၾကည့္တဲ့ Oswald Cobblepot ရဲ႕ fanေတြအတြက္ ပင္ဂြင္း Adult ကို ခံစားရမဲ့ ဇာတ္ကားဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ Catwoman ရဲ႕ Nine Live ...